Global Voices teny Malagasy » Entanina Tsy Hihinana Vary Be Loatra Ny Singaporeana, Satria Mitombo Ny Tahotra Momba Ny Diabeta · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Mey 2016 3:37 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Sakafo
Vary fotsy iray lovia taminà trano iray fisakafoana tao Singapaoro. Sary an'i Charles Haynes. Loharano: Flickr / CC 2.0.
Entanin'ny “Health Promotion Board (HPB)” – Filankevitra Fampiroboroboana ny Fahasalama ao Singapaoro ny olona mba hihinana karazana vary mahasalama satria lazainy fa mety ho ratsy lavitra noho ireo zavapisotro be siramamy aza ny vary fotsy ka hteraka diabeta.
Miantoka ny iray ampahatelon'ny kaloria fihinan'ireo Singaporeana ny vary, foto-tsakafo iray ao amin'ny firenana sy ny ankamaroan'ireo faritra ao Azia, raha zara fa mahazo 3,5 isanjato monja ireo zavapisotro be siramamy anaty vifotsy.
Ny gazety “Straits Times” no nampita  ny tatitry ny HPB tamin'ny 6 May, nanasongadina tarehimarika mampiseho hoe misy carbohydrate avo roa heny ny vary iray lovia raha mitaha amin'ny zavapisotro iray malefaka.
Niteraka fifanakalozan-dresaka tety anaty aterneto io ampaham-baovao io, narahan'ireo kiana marobe natao ho an'ilay filankevitra noho ny fanaovany fampielezankevitra mamely ny vary, raha tokony ho nifantoka tamin'ny siramamy, ireo zavapisotro tsy mahasalama, ary ireo sakafo indostrialy hafa. Maro koa no nanampy fa famitàhana ny manome tsiny ny vary ho miteraka diabeta, tamin'ny fampahatsiahivana  ny HPB fa ireo Singaporeana sy ny ankamaroan'ireo Aziatika dia efa an'arivo taona maro no nihinana vary.
Teboka mitovitovy amin'izay no navoitran’ i Richard Seah, mpanoratra :
Efa nandritry ny 10.000 taona no nohanin'ny olombelona ho toy ny foto-tsakafony ny vary sy ireo voa hafa.
Fa fotsiny taorian'ny Revolisiona Indostrialy, 300 taona latsaka lasa izay, ny siramamy vao mba lasa takatra kokoa sy niditra ho anatin'ny sakafo mahazatra. Ary tato anatin'ny 50 latsaka na ny toy izany vao niakatra be ny fanjifàna siramamy.
Koa tao anatin'ny tataran'ny zanak'olombelona, nanakaiky ny aotra ny fanjifàna siramamy. Ao anatin'ny fiarahamonina maoderina amin'izao andro izao, tafakatra efa ho 70kg isan'olona isantaona ny fanjifàna siramamy. Io fidangànan'ny fanjifàna siramamy io – miaraka amin'ny fiakaran'ny fanjifàna ireo sakafo simika sy voatr'olombelona – dia mifandray amin'ny fitomboan'ireo aretina mamono miadana amin'izao andro maoderina izao.
Hadalàna tsotra izao ny filazana ny vary ho ratsy indrindra noho ny siramamy.
Ian Tan, mpanao gazety fahiny, nilaza fa heveriny  ho tsy maneho ny maha-tomponandraikitra ny famoahana tantara aminà lohateny manaitaitra sy tarehimarika manakorontan-tsaina toy izany:
Ankehitriny satria misy ny vaovao na resaka hoe ratsy ho anao ny vary, marobe ny olona no handray an-tendrony fotsiny ary hitsahatra tsy hihinana vary. Avy eo rehefa mandeha amin'ny tsy falehany ny fahasalamany, omeny tsiny ny zavatra rehetra fa tsy ny fahataitairany, ny tsy fahalalàny ary ny tsy nahavitàny nandinika na nikaroka izy tenany mihitsy.
Aza eritreretina akory ny hanomboka handray hevitra kidaladala toy ny hampifanolo toerana ny zavapisotro maivana amin'ny vary, na toy inona aza ny mety ho dikan'ireo tarehimariky ny gazety. Vao mainka hatavy sy ho fatin'ny tavy mihoatra lavitra noho izay natahoranao hatrizay ianao.
Rehefa naneho hevitra momba ireo adihevitra ety anaty aterineto mikasika ny vary sy ny siramamy, nanazava  ny HPB fa tsy mangataka ny olona hitsahatra tsy hihinana vary akory izy na hoe vary fotsiny no miteraka diabeta. Niteny izy fa manoro hevitra fotsiny ny vahoaka hoe mampihena ny mety hahatongavan'ny aretina diabeta ny tsy fihinanana vary be loatra. Sosokevitry ny  HPB ihany koa ny hihinanana vary mena ho solon-tsakafo mahasalama. Saingy ny sasany naneho hevitra  tao amin'ny media sosialy hoe lafo kokoa ny vary mena, izay mety hampihemotra ireo tokantrano sahirana tsy hividy azy io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/22/82664/
 no nampita: http://www.straitstimes.com/singapore/health/diabetes-the-rice-you-eat-is-worse-than-sugary-drinks
 tamin'ny fampahatsiahivana: https://www.facebook.com/hpbsg/posts/1325437400806853
 Sosokevitry ny: http://www.theonlinecitizen.com/2016/05/health-promotion-board-changing-its-tune-on-rice-in-its-battle-cry-against-diabetes/
 naneho hevitra: https://www.facebook.com/TheStraitsTimes/posts/10153477689717115